Djibouti Oo Heshay Tallaalka COVID-19 – Great Banaadir
DJIBOUTI – Dowladda Jabuuti ayaa shaacisay in maanta oo Sabti ah ay heshay qeybtii ugu horreysay ee tallaalka Covid-19. Lama sheegin cadadka soo gaaray Jabuuti, hase yeeshee, waxaa hay’adaha gargaarku sheegeen in toddobaadkii horena ay Jabuuti heshay cirbadihii loo isticmaali lahaa in tallaalka lagula mudo dadka.
Tallaalkan ayaa ka yimid COVAX oo ah mashruuc ay samaysay Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO, Isbahaysiga Tallaalka GAVI iyo hay’ad kale oo lagu magacaabo Isbahaysiga Diyaargarowga Cudurrrada Faafa.
Warar ay idaacadda VOA ka heshay il-wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in 300 oo kun oo goojo oo ah qaybtii ugu horraysay ee tallaalka ay sugaysay Soomaaliya oo ahaa 1 milyan iyo 200 kun uu maanta soo gaadhay magaalada Nairobi.
Has eyeeshee, dowladaha ay soo gaaraan shixnadda tallaalka ayaa laga filayaa in ay la yimaadaan qorshe ay tallaalka ugu qaybinayaan dhammaan gobollada dalka.
Mid ka mid ah khubarada caafimaadka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa VOA u sheegay in dhibaatada ugu weyn ay noqonayso haddii daawada dalka la keeno, iyadoo aan la haynin qorshihii lagu qaybin lahaa, ama lagu bilaabi lahaa tallaalka.
VOA waxay isku dayday in ay la xiriirto Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Foosiya Abiikar Nuur, ilaa haatanna nooma suurtogelin inaan ku helno Khadka telefoonka. – VOA Somali